Kwụsị ịchọ ka ihe mee wee mee ka ọ mee. - Amaghi ama - Quedia Pedia
Ansmụ mmadụ bụ nnukwu anụ ọhịa n'ụwa, ha di ukwa. Anyị niile na-achọ ka ihe gaziere anyị na ndụ anyị, anyị niile ga-achọ ka anyị gbochie ihe ọjọọ ime na ndụ anyị, mana enwere ndị pere mpe na-eme ihe ọ bụla iji mee ka ihe ha chọrọ mezuo.
Anyị chọrọ ịbụ nnukwu dọkịta ma ọ bụ injinia na-arụ ọrụ nke ọma, onye na-agụ egwú na-elegharị anya, cricketer na-enweghị atụ, wdg Ọ dị anyị ka ya bụrụ na anyị na-agba nnukwu ụlọ ọrụ ahụ ajụjụ ọnụ; ọ dị anyị ka ya bụrụ na anyị na onye egwu ahụ na-egwu egwu; ọ dị anyị ka anyị nwee ike kpọọ otu onye na-eme egwuregwu otu ugboro na ndụ anyị. Anyị niile nwere ọtụtụ echiche.
Agbanyeghị, anyị adịghị aghọta otu obere ihe. Anyị aghọtaghị na kama ichere naanị na ịchọrọ ka ihe mee na anyị, ọ bụrụ na anyị na-agba mbọ ime ka ọ mee, anyị nwere ike ịgafe otu nzọụkwụ nso na nrọ anyị, n'ọchịchọ anyị.
Na-echeta mgbe niile na ọ bụrụ na ị rọrọ nrọ, ihe mgbaru ọsọ, ị nwere ike imezu ya. Ọ pụta ìhè n’ihu gị n’ihi na ị dịla njikere ma nwee ike ịmalite ije ije n’ụzọ iji mezuo nrọ ahụ. Nke fọdụrụ, ị ga-emerịrị ya n'onwe gị.
Ikwesiri ịchụso ya. To ga na-agba mgba maka ya. Willwa ga-anọgide na-atụba gị nsogbu. Agbanyeghị, ị ka ga-ejisi ike ijigide ya. Tough ga-ezute oge siri ike; Nrọ gị ga-abịaru nso na-emebi emebi; kama I gha enye ha ihe nchebe. I kwesiri idobe ha ndu.
N’ihi na, mara otu ihe oge niile na ọ bụrụhaala na ị na-ejigide ihe mgbaru ọsọ gị, ọ ga - enyere gị aka ịmeziwanye nkà gị iji nweta ya. Yabụ, mgbe ọ bụla ịchọrọ ihe, were ụzọ ole na ole iji wee ruo ebe ahụ. Onweghị ihe na-abịa n’efu; I gha eme ya.
Mee ya ugbu a Quotes
Mee ya Quotes
Nnukwu ihe nkwuputa okwu
Echiche sitere n'ike mmụọ nsọ
Akwụkwọ Ọrụ Quotes
Naanị Mee Ọ Quotes
Obere edemede na-agba ume
Okwu okwu mkpali
Ejila aka onye ọzọ nwee obi uto gị. - Amaghi ama
Ejila aka onye ọzọ nwee obi uto gị. - Isi okwu ndi amaghi ama:
Nkwanye ugwu diri ndi kwesiri ya, obughi ndi choro ya. - Amaghi ama
Nkwanye ugwu bu otu n’ime ihe kachasi mma mmadu n’aru mmadu. Ọ bụrụ na mmadụ…
Atala ndị mmadụ ụta maka mmechuihu gị. Gba onwe gị ụta maka ịtụ anya ihe dị ukwuu n'aka ha. - Amaghi ama
Atala onye ọ bụla ụta maka mmechuihu gị ebe ọ bụ njo gị inwe ọtụtụ atụmanya site na…
Oge ụfọdụ ịhapụ ịhapụ ndị mmadụ. Ọ bụghị n'ihi na ịchọghị ịma, mana ọ bụ maka na ha achọghị. - Amaghi ama
Mmekọrịta mmekọrịta mmadụ na-aka mma ma ọ bụrụ na ejiri ya ụzọ abụọ. Nke a putara na mmekorita ndi mmadu kwesiri ibu nnwekorita, na…
Mgbe ndụ mechiri ụzọ. Meghee ya ozo. Ọ bụ ụzọ. Nke ahụ bụ ka ha si arụ ọrụ. - Amaghi ama
Mgbe ndụ mechiri ụzọ. Meghee ya ozo. Ọ bụ ụzọ. Nke ahụ bụ ka ha si arụ ọrụ. - Amaghi ama…